မဟန ဆရာတော်ကို မဲရှုံးရင် အမျိုးဘာသာလုပ်ငန်းတွေ စွန့်လွှတ်မယ်လို့ ဦးဝီရသူဆို၊ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ဝတ်စုံတွေ ရေရှည်တည်တံ့အောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီအပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ
မဟန ဆရာတော်ကို မဲရှုံးရင် အမျိုးဘာသာလုပ်ငန်းတွေ စွ...
10 มิ.ย. 2562 - 10:39 น.
ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ဝတ်စုံတွေ ရေရှည်တည်တံ့အောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ
ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ရှမ်းစော်ဘွားတွေဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံ ၁၃၈ ထည်ကို ရေရှည်တည်တံ့အောင်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ အောင်မြင်စွာနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက် ဦးစီးဌာန၊ဒုတိယ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ကိုကိုနိုင်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ဒီထဲကမှ ရှားပါးပြီး လက်ရာမြောက်တဲ့ ရှမ်းစော်ဘွားတွေ ရှေးခေတ် အဆက် ဆက်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ အဝတ်အထည်တွေနဲ့ ရာထူးအဆင့်အလိုက်ဝတ်ဆင်ကြရတဲ့ ဝတ်စုံတွေကို ခင်းကျင်း ပြသထားတဲ့ ပြပွဲကို ရန်ကုန်အမျိုးသားပြတိုက်မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြပွဲပြုလုပ်ပြီးပြသနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
'' ဒီဝတ်စုံတွေက အရင် ညောင်ရွှေပြတိုက်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ထိန်းသိမ်းထားတာတွေပါ။ ပထမ တော့ ဒါတွေကို နိုင်ငံခြားကိုပို့ပြီးထိန်းမလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် စရိတ်က တအားကြီးလွန်းတော့ ဒီမှာပဲ စမ်းသပ်တာ အခု အောင်မြင်သွားပြီ။ ဒါကိုဌာနကနေ ရေရှည်တည်တံအောင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာက ဝတ်စုံတွေဖြစ်လို့ အများပြည်သူတွေကြည့်စေချင်လို့ပြပွဲလုပ်တာပါ။'' လို့ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက် ဦးစီးဌာန၊ဒုတိယ ညွန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားပြတိုက် (ရန်ကုန်)ကနေ စီစဉ်ကျင်းပနေတဲ့ " ရှမ်းစော်ဘွားကြီးများ၏ ရှားပါး ဝတ်စုံပြပွဲ (Exhibition of the Rare Traditional Costumes of the Shan SawBwas)" ကို ဇွန် ၉ ရက်နေ့ကနေ ၁၈ ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြပွဲမှာ ပြသထားတဲ့ ရှမ်းစော်ဘွားတွေရဲ့ ဝတ်စုံတွေကို ပြပွဲပြီးပါက ရေရှည်တည်တံ့စေဖို့ ထိန်းသိမ်း သန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးရင်တော့ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ညောင်ရွှေယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကို ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျင်းပမယ့် အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင် အစည်းအဝေးကို ထိုင်းအာဏာပိုင်က ခွင့်မပြုတဲ့အတွက် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။
ဒီမတိုင်ခင် ဇွန်လ ၅ ရက်ကနေ ၇ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ စုဖွဲ့မှုအသစ် အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်ပင်ခံ အစည်းအဝေး - Peace Process Consultative Meeting (PPCM) ဖွဲ့စည်းရေးဟာလည်းအတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအဖွဲ့ဟာ တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းထားတဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ(UNFC) ပုံစံမျိုးမဟုတ်သလို တပ်ပေါင်းစုဆန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး အမြဲတမ်း ကော်မတီ (FPNCC) လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မယ့် အလုပ်အဖွဲ့တစ်ခုလို တည်ရှိနေမယ်လို့ ချင်းမိုင်မြို့က ပြည်ထောင်စု အင်စတီကျုရဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ရဲ့ အကြံပေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဦးခွန်စိုင်းက ပြောပါတယ်။
အပစ်ရပ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားနက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နည်းလမ်း ရှာနေပြီး ဒီစုဖွဲ့မှုအသစ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲဟာ အစောပိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ရဲက ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးပမ်းရာကနေ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ အကြမ်းဖက်အသွင်ပြောင်းခဲ့
ပြစ်မှုကျုးလွန်သူတွေကို တရုတ်လွှဲပေးရမယ့်ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ဟောင်ကောင်မှာဆန္ဒပြ
ဟောင်ကောင်မှာတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတယ်လို့ သံသယရှိသူတွေကို ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ဖို့ တရုတ်ပြည်မကြီးကို လွှဲပြောင်းပေးမယ့် အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကို ဆန္ဒပြမှုဟာ အကြမ်းဖက်အသွင်ဆောင်အောင် လုပ်ခဲ့သူတွေကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူသွားမယ်လို့ ဟောင်ကောင် ရဲချုပ်က ပြောပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲအကြမ်းဖက်အသွင်ဆောင်ခဲ့တာကို ရဲချုပ် စတီဖင် လို က ရှုတ်ချလိုက်သလို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ ကြတဲ့ ဟောင်ကောင်ရဲ့အစဉ်အလာ ပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။
လူပေါင်း တစ်သန်းနီးပါး တက်ရောက်တယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေက ပြောထားတဲ့ ဒီဆန္ဒပြပွဲဟာ အစောပိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီအဆောက်အအုံရှေ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲက ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးပမ်းရာကနေ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ အကြမ်းဖက်အသွင်ပြောင်းခဲ့တာပါ။
อัลบั้มภาพ မဟန ဆရာတော်ကို မဲရှုံးရင် အမျိုးဘာသာလုပ်ငန်းတွေ စွန့်လွှတ်မယ်လို့ ဦးဝီရသူဆို၊ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ဝတ်စုံတွေ ရေရှည်တည်တံ့အောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီအပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ